သတ်မှတ်ချက်များ - Sorrento Therapeutics
အကျုံးဝင်သည့်ရက်စွဲ- ဇွန်လ 14 ရက်၊ 2021 ခုနှစ်
ဤအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများ (""သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများ”) ကြားထဲသို့ ဝင်သည်။ Sorrento Therapeutics, Inc.ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းခွဲများနှင့် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများ၏ အမည်နှင့် ကိုယ်စား ("Sorrento","us","we, "သို့မဟုတ်"ကျွန်တော်တို့၏”) နှင့် သင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် အခြားအဖွဲ့အစည်းကို ကိုယ်စားပြုပါက ထိုအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း (မည်သည့်အခြေအနေတွင်ဖြစ်စေ “သငျသညျ”) ဤအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသော ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်များ၊ အပလီကေးရှင်းများနှင့် ပေါ်တယ်များထံသို့ သင်၏ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်/သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားပြီး ဤအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများထံသို့ ချိတ်ဆက်ထားသော (စုပေါင်းအားဖြင့် “ဆိုက်ကို”) နှင့် ဆိုက်မှတစ်ဆင့် ဖွင့်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အရင်းအမြစ်များ (တစ်ခုစီသည် “တစ်ခုစီ၊ဝန်ဆောင်မှု"နှင့်စုပေါင်း, အ"န်ဆောင်မှုများ”) ဤအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများ၊ လူနာဓာတ်ခွဲခန်းဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် COVI-STIX ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့သော Sorrento မှပေးဆောင်သော အခြားဆိုက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ ဤအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။ ဆိုက်ကိုရှာဖွေခြင်း သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် (1) သင်ဖတ်ရှု၊ နားလည်ပြီး၊ အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များအရ လိုက်နာရန်သဘောတူကြောင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်၊ (2) သင်သည် ဥပဒေကြောင်းအရ ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေအတိုင်း လုပ်ဆောင်ရန် SORRENTO နှင့် (3) သင့်တွင် အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းများထဲသို့ ဝင်ရောက်ရန် သင့်တွင် အခွင့်အာဏာရှိပါသည်၊ သင်အသုံးပြုသူအဖြစ် အမည်ပေးထားသော ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စား သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စား ဝင်ရောက်အသုံးပြုရန် နှင့် ထိုကုမ္ပဏီအား အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း ချိတ်ဆက်ရန် သင့်တွင် အခွင့်အာဏာရှိသည်။ ဝေါဟာရ “မင်း” သက်ဆိုင်သည့်အတိုင်း တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများအရ သင်သဘောမတူပါက၊ သင်ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုက် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြု၍မရပါ။.
ဤအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများသည် SORRENTO ၏တစ်ဦးတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ Sorrento သည် Site တွင် ထိုပြောင်းလဲမှုများကို ပို့စ်တင်ခြင်းဖြင့်၊ အသုံးပြုမှုစည်းမျဥ်းများထိပ်ရှိ ရက်စွဲကို ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ် Site သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့် သင့်အား အသိပေးချက်ပေးပို့ခြင်းဖြင့် Sorrento သည် သင့်ထံအကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ (Sorrento မှပေးထားသော မည်သည့်အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ အကြောင်းကြားစာပေးပို့ခြင်းဖြင့် အပါအဝင်)။ အခြားနည်းဖြင့် မဖော်ပြထားပါက၊ ဆိုက်ပေါ်တွင် ပို့စ်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းသတိပေးချက်ပေးပို့ခြင်းတွင် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုမှန်သမျှသည် ချက်ချင်းထိရောက်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများကို သင်ကန့်ကွက်ပါက အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အသုံးပြုမှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို သင် ရပ်စဲနိုင်ပါသည်။ သို့သော်၊ ထိုသတိပေးချက်ကာလပြီးနောက်တွင် ဆိုက် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သင်သည် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများအားလုံးကို သဘောတူညီသည်ဟု မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် လက်ရှိ သတ်မှတ်ချက်များကို ကြည့်ရှုရန် ဆိုက်ကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။
Sorrento နှင့် သင့်အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကြားတွင် သက်ဆိုင်သည့် စည်းကမ်းချက်များ အပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုအချို့တွင် သင်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပါဝင်ခြင်းနှင့် ဖြည့်စွက်ဝန်ဆောင်မှုကို သင်အသုံးပြုသည့်အခါ သင့်လက်ခံမှုအတွက် တင်ပြထားသည့် စည်းကမ်းချက်များ ("နောက်ဆက်တွဲစည်းကမ်းချက်များ”) အသုံးပြုမှု စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် ဖြည့်စွက်စည်းမျဥ်းများနှင့် မကိုက်ညီပါက၊ အပိုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိန်းချုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုမှု စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ နှင့် သက်ဆိုင်သည့် နောက်ဆက်တွဲ စည်းမျဥ်းများ အားလုံးကို ဤနေရာတွင် ရည်ညွှန်းသည် "သဘောတူညီချက်။ "
SORRENTO ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်း။
ခွင့်ပြုအသုံးပြုခြင်း. ဆိုက်၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ နှင့် အချက်အလက်၊ ဒေတာ၊ ရုပ်ပုံများ၊ စာသား၊ ဖိုင်များ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဇာတ်ညွှန်းများ၊ ဂရပ်ဖစ်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ အသံများ၊ ဂီတ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ရုပ်မြင်သံကြားပေါင်းစပ်မှုများ၊ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော အင်္ဂါရပ်များနှင့် အခြားပစ္စည်းများ (စုပေါင်း၊ “အကြောင်းအရာ”) ဆိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများပေါ်တွင် သို့မဟုတ် မှတဆင့် ရရှိနိုင်သော (ထိုကဲ့သို့သော အကြောင်းအရာ၊ ဆိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ၊ တစ်ခုစီ၊Sorrento အိမ်ခြံမြေ” နှင့် စုပေါင်းအားဖြင့်၊ "Sorrento ပိုင်ဆိုင်မှုများ") ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများဖြင့် ကာကွယ်ထားသည်။ သဘောတူညီချက်အရ၊ Sorrento သည် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းတွင်းစီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ Sorrento Properties ကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုရန် ကန့်သတ်လိုင်စင်တစ်ခု ပေးပါသည်။ သီးခြားလိုင်စင်တစ်ခုတွင် Sorrento မှ သတ်မှတ်ထားသော အခြားနည်းမဟုတ်ပါက၊ Sorrento Properties အားလုံးကို အသုံးပြုခွင့်သည် သဘောတူညီချက်တွင် အကျုံးဝင်ပါသည်။
အရည်အချင်းပြည့်မီ. သင်သည် စည်းနှောင်ထားသော စာချုပ်တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းရန် တရားဝင်အသက်ပြည့်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်စားပြုပြီး Sorrento Properties ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ဥပဒေများ၊ သင့်နေထိုင်ရာနေရာ သို့မဟုတ် အခြားသက်ဆိုင်ရာ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုခုကို အသုံးပြုခြင်းမှ တားမြစ်ထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါ။ သင်သည် အသက် 18 နှစ်အထက် သို့မဟုတ် လွတ်မြောက်လာသည့် အရွယ်မရောက်သေးသူ သို့မဟုတ် တရားဝင် မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူ၏ သဘောတူညီချက်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သက်သေပြပြီး သတ်မှတ်ချက်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များ၊ တာဝန်များ၊ ကတိသစ္စာပြုမှု၊ ကိုယ်စားပြုမှုများနှင့် အာမခံချက်များတွင် အပြည့်အဝ ပါဝင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီပါသည်။ ဤအသုံးပြုမှု စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် သဘောတူညီချက်တွင် အကျုံးဝင်သော၊ လိုက်နာရန်နှင့် သဘောတူညီချက်ကို လိုက်နာရန်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ Sorrento Properties သည် 16 နှစ်အောက်ကလေးများအတွက် ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်သောကြောင့် သင်သည် အသက် 16 (16) နှစ်ကျော်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။ သင်သည် အသက် XNUMX နှစ်အောက်ဖြစ်ပါက၊ Sorrento Properties ကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် မသုံးပါနှင့်။
အချို့သောကန့်သတ်ချက်များ။ အသုံးပြုမှု စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများတွင် သင့်အား ပေးအပ်ထားသော အခွင့်အရေးများသည် အောက်ပါ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် အကျုံးဝင်သည်- (က) လိုင်စင်၊ ရောင်းချ၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ တာဝန်ပေးခြင်း၊ မျိုးပွားခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ အိမ်ရှင် သို့မဟုတ် Sorrento Properties သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို စီးပွားရေးအရ အသုံးချခြင်းမပြုရပါ။ ဆိုက်အပါအဝင် Sorrento Properties (ခ) Sorrento ၏ မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ လိုဂို သို့မဟုတ် အခြား Sorrento Properties (ပုံများ၊ စာသား၊ စာမျက်နှာအပြင်အဆင် သို့မဟုတ် ပုံစံများအပါအဝင်) ကိုထည့်သွင်းရန် ဘောင်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဘောင်သွင်းခြင်းနည်းပညာများကို အသုံးပြုခြင်းမပြုရပါ။ (ဂ) Sorrento ၏အမည် သို့မဟုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကို အသုံးပြု၍ metatags သို့မဟုတ် အခြားသော "ဝှက်ထားသောစာသား" ကို အသုံးမပြုရပါ။ (ဃ) Sorrento Properties ၏ အထက်ဖော်ပြပါ ကန့်သတ်ချက်များကို အတိအလင်း တားမြစ်ထားသည့်အတိုင်းအတာမှလွဲ၍ သင်သည် မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဘာသာပြန်ခြင်း၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပြုလုပ်ခြင်း၊ ခွဲထုတ်ခြင်း၊ ပြောင်းပြန်စုစည်းခြင်း သို့မဟုတ် နောက်ပြန်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ခြင်း မပြုရ၊ (င) လက်စွဲ သို့မဟုတ် အလိုအလျောက် ဆော့ဖ်ဝဲ၊ စက်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များ (ပင့်ကူများ၊ စက်ရုပ်များ၊ ခြစ်စက်များ၊ စာရေးကိရိယာများ၊ ကိုယ်ပွားရုပ်ပုံများ၊ ဒေတာတူးဖော်ရေးကိရိယာများ သို့မဟုတ် အခြားအရာများအပါအဝင်) ကို "ခြစ်" သို့မဟုတ် မည်သည့်ဝဘ်မှဒေတာကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် မသုံးရပါ။ ဆိုက်အတွင်းပါရှိသော စာမျက်နှာများ (ကျွန်ုပ်တို့သည် အများသူငှာ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၏ အော်ပရေတာများအား ခွင့်ပြုချက်မှလွဲ၍ ကျန်ပစ္စည်းများကို အများသူငှာ ရှာဖွေနိုင်သော ညွှန်းကိန်းများ ဖန်တီးရန်အတွက် လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာအထိ ဆိုက်မှပစ္စည်းများကို ပင့်ကူများအသုံးပြုရန် ပင့်ကူများကို အသုံးပြုခွင့်ပြုခြင်းမှတပါး၊ ထိုပစ္စည်းများ၏ ကက်ရှ်များ သို့မဟုတ် မော်ကွန်းတိုက်များ); (စ) အလားတူ သို့မဟုတ် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော ဝဘ်ဆိုဒ်၊ အက်ပ်လီကေးရှင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို တည်ဆောက်ရန်အတွက် သင်သည် Sorrento Properties ကို ဝင်ရောက်သုံးစွဲခွင့်မပြုရပါ။ (ဆ) ဤနေရာတွင် အတိအလင်းဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း မှတပါး၊ Sorrento Properties ၏ အစိတ်အပိုင်းကို ကူးယူခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း၊ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း၊ ပြသခြင်း၊ ပို့စ်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် မည်သည့်ပုံစံဖြင့် သို့မဟုတ် မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မျှ မကူးစက်နိုင်ပါ။ (ဇ) မူပိုင်ခွင့်သတိပေးချက်များ သို့မဟုတ် Sorrento Properties တွင် ပါရှိသော အခြားကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားများကို ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်စီးခြင်းမပြုရပါ။ (ဈ) သင်၏ဆက်စပ်မှုကို မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းနှင့်မျှ အယောင်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် လွဲမှားစွာ ဖော်ပြခြင်းမပြုရ။ Sorrento Properties တွင် နောင်ထွက်ရှိမှု၊ အပ်ဒိတ် သို့မဟုတ် အခြားထပ်ပေါင်းမှုမှန်သမျှသည် အသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ဖြစ်ရမည်။ Sorrento၊ ၎င်း၏ ပေးသွင်းသူများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် အသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများတွင် အပ်နှင်းထားခြင်းမရှိသည့် အခွင့်အရေးအားလုံးကို သိမ်းဆည်းထားသည်။ မည်သည့် Sorrento Property ကိုမဆို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးပြုခြင်းသည် Sorrento မှ ပေးအပ်ထားသော လိုင်စင်များကို အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ရပ်စဲပါသည်။
Sorrento ဖောက်သည်များက သုံးသည်။ အကယ်၍ သင်သည် Sorrento ဖောက်သည်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ပေါ်တယ်အပါအဝင် ဆိုက် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနေသူဖြစ်ပါက၊ သင်သည် (က) Sorrento Properties ကိုအသုံးပြုသည့်အခါတွင် သင်သည် ကျန်းမာရေးအာမခံအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းများအားလုံးကို လိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူမှုနှင့် တာဝန်ခံမှုအက်ဥပဒေနှင့် ၎င်း၏အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများနှင့် အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် ဒေတာကာကွယ်ရေးဥပဒေများ၊ (ခ) သင့်တွင် လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် သဘောတူညီချက်များမရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့် ကာကွယ်ထားသော ကျန်းမာရေးအချက်အလက်အပါအဝင် မည်သည့်အချက်အလက်ကိုမျှ ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ Sorrento မဟုတ်ဘဲ သင်လိုအပ်သော ထုတ်ဖော်မှုများအားလုံးကို ပေးအပ်ထားကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် သင့်တွင် တာဝန်ရှိကြောင်းနှင့် လူနာများထံမှ လိုအပ်သော သဘောတူညီချက်များနှင့်/သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်များကို ရယူထားနိုင်စေရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် ဒေတာကာကွယ်ရေးဥပဒေများ လိုအပ်နိုင်သည်နှင့်အညီ၊ သင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိ စည်းမျဉ်းများ။ Sorrento ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအလေ့အကျင့်များအကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကြည့်ရှုပါ။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ.
လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲ။ ဝန်ဆောင်မှုများက မိုဘိုင်းအစိတ်အပိုင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည့်ကိစ္စများတွင် Sorrento Properties နှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သော မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းတစ်ခုအပါအဝင် Sorrento Properties သို့ ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်သော စက်ကိရိယာနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်အားလုံးကို ပံ့ပိုးပေးရပါမည်။ Sorrento Properties ကိုအသုံးပြုသောအခါတွင်သင်ကျသင့်သည့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းအခကြေးငွေများအပါအဝင် မည်သည့်အခကြေးငွေများအတွက်မဆို သင့်တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။
Sorrento ဂုဏ်သတ္တိများ Sorrento နှင့် ၎င်း၏ ပေးသွင်းသူများသည် Sorrento Properties တွင် အခွင့်အရေး၊ ခေါင်းစဉ်နှင့် စိတ်ဝင်စားမှုအားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သင်သဘောတူပါသည်။ မူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်သွယ်မှုအမှတ်တံဆိပ်၊ ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသား သို့မဟုတ် Sorrento Properties တွင်ထည့်သွင်းထားသော သို့မဟုတ် ပူးတွဲပါရှိသည့် အခြားမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးသတိပေးချက်များကို သင်သည် ဖယ်ရှားခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ဖုံးကွယ်ခြင်းမပြုပါ။ သင့်တွင် Sorrento Properties တွင် သို့မဟုတ် ပေါ်လာသည့် မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ ခေါင်းစဉ် သို့မဟုတ် စိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြောင်း သင်သဘောတူပါသည်။
အမှတ်တံဆိပ်။ Sorrento Therapeutics, Inc.၊ Sorrento၊ Sorrento လိုဂို၊ တွဲဖက်အမည်များနှင့် လိုဂိုများ၊ ဆက်စပ်ဂရပ်ဖစ်များ၊ လိုဂိုများ၊ ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများ၊ အိုင်ကွန်များ၊ အရောင်းအ၀ယ်ဝတ်စုံများနှင့် Sorrento Properties တစ်ခုခုတွင် သို့မဟုတ် ဆက်စပ်အသုံးပြုထားသော ကုန်သွယ်မှုအမည်များသည် Sorrento သို့မဟုတ် ၎င်း၏တွဲဖက်များ၏ ကုန်သွယ်မှုအမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်ပြီး၊ Sorrento ၏ ကြိုတင်ရေးသားခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးမပြုရပါ။ Sorrento Properties တွင် သို့မဟုတ် ပေါ်လာနိုင်သည့် အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများနှင့် ကုန်သွယ်မှုအမည်များသည် သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤကဏ္ဍမှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ခွင့်မပြုသည့် မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို Sorrento Properties တွင် သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်များကို အသုံးပြုပါက၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် သင့်သဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖောက်နေပြီး မူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် အခြားဥပဒေများကို ချိုးဖောက်နေပါသည်။ ထိုအခြေအနေတွင်၊ ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှုများကို အသုံးပြုရန် သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အလိုအလျောက် ရုပ်သိမ်းပါသည်။ ပစ္စည်းများအတွက် ခေါင်းစဉ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင် ကျန်ရှိနေသည် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်ပါရှိသော ပစ္စည်းများရေးသားသူများနှင့်အတူ ရှိနေပါသည်။ အတိအလင်း ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော အခွင့်အရေးအားလုံးကို လက်ဝယ်ရှိသည်။
တုံ့ပြန်ချက်။ အကြံပြုချက်၊ အကြံပြုချက်၊ ဝီကီ၊ ဖိုရမ် သို့မဟုတ် အလားတူ စာမျက်နှာများမှတစ်ဆင့် Sorrento သို့ အကြံဉာဏ်များ၊ အကြံပြုချက်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်/သို့မဟုတ် အဆိုပြုချက်များကို တင်ပြခြင်းအား သင်သဘောတူသည် ("တုံ့ပြန်ချက်") သည် သင်၏ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်ဖြစ်ပြီး၊ Sorrento တွင် ဤတုံ့ပြန်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ (ကန့်သတ်ချက်မရှိသောလျှို့ဝှက်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများအပါအဝင်) တွင် တာဝန်များမရှိပါ။ တုံ့ပြန်ချက်တင်ပြရန် သင့်တွင် လိုအပ်သောအခွင့်အရေးအားလုံးရှိကြောင်း သင်ကိုယ်စားပြုပြီး အာမခံပါသည်။ ဤဥပဒေဖြင့် သင်သည် Sorrento အား အပြည့်အဝအခပေး၊ အခကြေးငွေမယူဘဲ၊ ရာသက်ပန်၊ ရုပ်သိမ်း၍မရသော၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ၊ သီးသန့်မဟုတ်သော၊ အပြည့်အဝလိုင်စင်ယူနိုင်သော အခွင့်အရေးနှင့် လိုင်စင်ကို အသုံးပြုရန်၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရန်၊ လုပ်ဆောင်ရန်၊ ပြသရန်၊ ဖြန့်ဝေရန်၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ မွမ်းမံပြင်ဆင်ရန်၊ ပြန်လည်ဖော်မတ်ထုတ်ရန်၊ ဆင်းသက်လာမှုကို ဖန်တီးရန် Sorrento Sorrento Properties နှင့်/သို့မဟုတ် Sorrento ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အထက်ဖော်ပြပါအခွင့်အရေးများကို စီးပွားဖြစ် သို့မဟုတ် စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သော နည်းလမ်းဖြင့် အမြတ်ထုတ်ခြင်း နှင့် အခြားနည်းအားဖြင့် စီးပွားဖြစ် သို့မဟုတ် စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သော အမြတ်ထုတ်ခြင်း နှင့် အထက်ဖော်ပြပါအခွင့်အရေးများကို လိုင်စင်ခွဲပေးရန်။
အသုံးပြုမှုအခြေအနေအရ၊ သဘောတူညီချက် သို့မဟုတ် တည်ဆဲဥပဒေအရ တားမြစ်ထားသည့် မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို Sorrento Properties ကို အသုံးမပြုရန် သဘောတူပါသည်။ Sorrento Properties တွင် သို့မဟုတ် ဖြတ်သန်းမှု တစ်စုံတစ်ရာကို သင် (i) မူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်သွယ်မှုအမှတ်တံဆိပ်၊ ကုန်သွယ်မှုလျှို့ဝှက်ချက်၊ မူပိုင်ခွင့်၊ လူသိရှင်ကြားအခွင့်အရေး သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏အခွင့်အရေးကိုမဆို ချိုးဖောက်ခြင်းမပြုရ၊ (ii) ဥပဒေမဲ့၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ အသရေဖျက်ခြင်း၊ အသရေဖျက်ခြင်း၊ နှိမ့်ချခြင်း၊ လှည့်ဖြားခြင်း၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်း၊ သူတပါး၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအား ကျူးကျော်ခြင်း၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်း၊ ညစ်ညမ်းသော၊ (iii) တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှု၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၊ မုန်းတီးမှု၊ သို့မဟုတ် လူတစ်ဦးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် လူတစ်စုအပေါ် ထိခိုက်နစ်နာစေမှုတို့ကို အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း၊ (iv) ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ သို့မဟုတ် တောင်းဆိုခြင်းမရှိသော ကြော်ငြာများ၊ အမှိုက် သို့မဟုတ် အများအပြား အီးမေးလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ (v) Sorrento ၏ ကြိုတင်ရေးသားထားသော ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းများနှင့်/သို့မဟုတ် အရောင်းများပါ၀င်သည် ။ (vi) Sorrento ၏ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကိုမဆို အယောင်ဆောင်ခြင်း၊ (vii) ဖောက်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် တွန်းအားပေးခြင်း၊ ဖောက်ဖျက်မည့် အပြုအမူ၊ တည်ဆဲဥပဒေ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများ ဖြစ်ပေါ်လာစေမည့်၊ (viii) Sorrento Properties ၏ သင့်လျော်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန် သို့မဟုတ် သဘောတူညီချက်မှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ခွင့်မပြုသော Sorrento Properties ကို အသုံးပြုခြင်း၊ သို့မဟုတ် (ix) Sorrento Properties ကို ချိုးဖောက်ရန် သို့မဟုတ် ကန့်သတ်မထားသော Sorrento Properties ၏ လုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များကို ချိုးဖောက်ရန် ကြိုးစားခြင်း၊ လက်စွဲ သို့မဟုတ် အလိုအလျောက် အသုံးပြုသည့်ဆော့ဖ်ဝဲ သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုခြင်းအပါအဝင်၊ (ix) ထိတွေ့ဆက်ဆံရန် ကြိုးပမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ထိတွေ့ဆက်ဆံရန် ကြိုးပမ်းခြင်းများ၊ Sorrento Properties တွင်ပါရှိသော မည်သည့်စာမျက်နှာမဆို၊ "ခြစ်၊" "crawl" သို့မဟုတ် "spider"၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ပိုးကောင်များ၊ သို့မဟုတ် အလားတူအန္တရာယ်ရှိသောကုဒ်ကို Sorrento Properties သို့ မိတ်ဆက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် Sorrento Properties ၏အသုံးပြုမှုကို အနှောင့်အယှက် သို့မဟုတ် အနှောင့်အယှက်ပေးရန် ကြိုးပမ်းခြင်း ဝန်ပိုခြင်း၊ "ရေကြီးခြင်း၊" "စပမ်းထုတ်ခြင်း၊" "မေးလ်ဗုံးဖောက်ခွဲခြင်း" သို့မဟုတ် "ပျက်ကျခြင်း" Sorrento Properties အပါအဝင် ကွန်ရက်။
Sorrento သည် Sorrento Properties ကို အချိန်မရွေး စောင့်ကြည့်ရန် သို့မဟုတ် ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် တာဝန်မရှိပါ။ Sorrento သည် သဘောတူညီချက်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုခုအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ချိုးဖောက်မှုများကို သိရှိပါက၊ Sorrento သည် ထိုချိုးဖောက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် အခွင့်အရေးကို လက်ဝယ်ထားပြီး Sorrento သည် Sorrento Properties ကို အသုံးပြုရန်အတွက် သင်၏လိုင်စင်ကို ချက်ချင်းရပ်စဲနိုင်သည်၊ မင်းကိုကြိုတင်အသိမပေးဘဲ။
Sorrento Properties တွင် ပြင်ပကုမ္ပဏီ ဝဘ်ဆိုက်များနှင့်/သို့မဟုတ် အပလီကေးရှင်းများသို့ လင့်ခ်များ ပါဝင်နိုင်သည် ("Third-Party Properties”) Third-Party Property သို့ လင့်ခ်တစ်ခုကို သင်နှိပ်လိုက်သောအခါ၊ သင်သည် Sorrento Properties မှ ထွက်သွားပြီး အခြားဝဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် ဦးတည်ရာ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒများအပါအဝင်) ကို လိုက်နာရမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သတိပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သော Third-Party Properties များသည် Sorrento ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် မရှိသည့်အပြင် မည်သည့် Third-Party Properties များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှ တာဝန်မရှိပါ။ Sorrento သည် ဤ Third-Party Properties များကို အဆင်ပြေစေရန်အတွက်သာ ပံ့ပိုးပေးကာ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ထောက်ခံခြင်း၊ အာမခံပေးခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ပကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကိုယ်စားပြုမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်၍ ပံ့ပိုးပေးထားသည့် မည်သည့် ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကိုမျှ ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါ။ သင်သည် Third-Party Properties ရှိ လင့်ခ်များအားလုံးကို သင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်ဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ သင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်မှထွက်ခွာသောအခါ၊ အသုံးပြုမှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပါ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် ဒေတာစုဆောင်းခြင်းအလေ့အထများ၊ ပြင်ပကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် မူဝါဒများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုနှင့် မည်သည့်ငွေပေးငွေယူကိုမျှ မလုပ်ဆောင်မီတွင် လိုအပ်သော သို့မဟုတ် သင့်လျော်သည်ဟု ခံစားရသည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သင့်သည်။ Sorrento Properties ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် Third-Party Property ကိုအသုံးပြုခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော တာဝန်ယူမှု အားလုံးကို Sorrento မှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သက်သာစေပါသည်။
သင်သည် Sorrento၊ ၎င်း၏မိဘများ၊ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများ၊ လုပ်ငန်းခွဲများ၊ အရာရှိများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ အေးဂျင့်များ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ နှင့် လိုင်စင်ရှိသူ (တစ်ဦးစီ၊ "Sorrento ပါတီ" နှင့် စုပေါင်းအားဖြင့် "Sorrento ပါတီများ") ကို ဆုံးရှုံးနစ်နာဆုံးရှုံးမှုများမှ အန္တရာယ်မရှိ၊ ၊ တာဝန်ခံမှုများနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ (ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ရှေ့နေများ၏အခကြေးငွေများအပါအဝင်) နှင့် သက်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းများ- (က) Sorrento Properties ကို သင်၏အသုံးပြုမှုနှင့် ဝင်ရောက်ခွင့်၊ (ခ) သင့်သဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖောက်ခြင်း၊ (ဂ) အခြားအသုံးပြုသူများ အပါအဝင် အခြားပါတီ၏ အခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် (ဃ) တည်ဆဲဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်း။ Sorrento သည် သင့်ထံမှ လျော်ကြေးပေးရမည့်ကိစ္စရပ်ကို သီးသန့်ကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဟု ယူဆရန် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် အခွင့်အာဏာကို လက်ဝယ်ရှိပါသည်။ မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို ရရှိနိုင်သောကာကွယ်ရေးကို အခိုင်အမာလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် Sorrento နှင့် အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်သည် ထိုပါတီမှ မသိသာသောစီးပွားရေးအလေ့အကျင့်တစ်ခုခုအတွက် သို့မဟုတ် ထိုပါတီ၏လိမ်လည်မှု၊ လှည့်ဖြားမှု၊ မှားယွင်းသောကတိပြုမှု၊ မှားယွင်းစွာဖော်ပြမှု သို့မဟုတ် ဖုံးကွယ်မှု၊ နှိပ်ကွပ်မှု သို့မဟုတ် ချန်လှပ်ထားခြင်းတို့အတွက် သင့်အား ဤပြဋ္ဌာန်းချက်မှ ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ . ဤအပိုင်းရှိ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် သဘောတူညီချက်၏ ရပ်စဲခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် Sorrento Properties သို့ သင်၏ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ဆက်လက်ရှင်သန်စေမည်ကို သင်သဘောတူပါသည်။
အာမခံချက်များနှင့် အခြေအနေများကို ငြင်းဆိုချက်
သင်သည် အတိအကျနားလည်သဘောပေါက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဥပဒေဖြင့် ခွင့်မပြုသည့်အတိုင်းအတာအထိ၊ သင်၏ SORRENTO ပိုင်ဆိုင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းသည် သင့်အတွက် တစ်ခုတည်းသောအန္တရာယ်သာဖြစ်ပြီး SORRENTO PROPERTIES သည် ပေးစွမ်းနိုင်သမျှ "" နည်းလမ်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ Sorrento ပါတီများအနေဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း, SORRENTO ပိုင်ဆိုင်မှုများ။ SORRENTO ပါတီများသည် အာမခံ၊ ကိုယ်စားပြုမှု သို့မဟုတ် အခြေအနေများကို မပြုလုပ်ပါ- (က) SORRENTO ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီလိမ့်မည်၊ (ခ) ဆိုက်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းအား အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမည် သို့မဟုတ် SORRENTO ၏ဂုဏ်သတ္တိများကို သင်အသုံးပြုခြင်းသည် အချိန်မီ၊ လုံခြုံမည် သို့မဟုတ် အမှားအယွင်းမရှိ၊ (ဂ) SORRENTO ၏ဂုဏ်သတ္တိများသည် တိကျသည်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ပြီးပြည့်စုံသည်၊ အသုံးဝင်သည်၊ သို့မဟုတ် မှန်ကန်လိမ့်မည်၊ (ဃ) ဆိုက်ကို အထူးအချိန် သို့မဟုတ် နေရာတစ်ခုခုတွင် ရနိုင်ပါမည်၊ (င) ချို့ယွင်းချက်များ သို့မဟုတ် အမှားအယွင်းများကို ပြုပြင်ပေးမည်၊ သို့မဟုတ် (F) ဆိုက်သည် ဗိုင်းရပ်စ်များ ကင်းစင်သော သို့မဟုတ် အခြားသော အန္တရာယ်ရှိသော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ အကြံဥာဏ် သို့မဟုတ် အချက်အလက်များ၊ နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာဖြင့်ဖြစ်စေ SORRENTO သို့မဟုတ် SORRENTO Properties မှတဆင့်ရရှိသော မည်သည့်အာမခံချက်မဆို ဤနေရာတွင် ဖော်ပြမည်မဟုတ်ပါ။
အမြတ်အစွန်း၊ ဝင်ငွေ သို့မဟုတ် ဒေတာ၊ သွယ်ဝိုက်၊ မတော်တဆ၊ အထူးအားဖြင့်၊ သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်ဖြစ်သော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၊ အမြတ်ငွေ သို့မဟုတ် ဒေတာ၊ သွယ်ဝိုက်၊ မတော်တဆ၊ အထူး၊ သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်ဖြစ်သော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၊ အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တာဝန်ရှိကြောင်း သင်နားလည်သဘောတူပါသည်။ အစားထိုးကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ကိစ္စရပ်များတွင် ဆောရီးပေးအဖွဲ့များမှ အကြံပြုထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊ သုံးစွဲသူများ၏ သဘောတူညီချက်မှ ပေါ်ပေါက်လာသော သို့မဟုတ် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော သဘောတူညီချက်များ၊ သဘောတူညီချက်များနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိ၊ တာဝန်ဝတ္တရားသီအိုရီမှ ရလဒ်- (က) SORRENTO Properties များကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးမပြုနိုင်ခြင်း၊ (ခ) မည်သည့် ကုန်စည်၊ ဒေတာ၊ အချက်အလက်များ၊ အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော အစားထိုး ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ ၏ ကုန်ကျစရိတ် ၊ ဝယ်ယူမှု သို့မဟုတ် ရရှိသော သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းရယူသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် လွှဲပြောင်းရယူသည့် သတင်းစကား၊ (ဂ) သင်၏လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဒေတာကို လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲခြင်း၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ နှင့်/သို့မဟုတ် သိမ်းဆည်းထားသော အချက်အလက်များ အပါအဝင်၊ (ဃ) SORRENTO Properties ဆိုင်ရာ မည်သည့် Third Party ၏ သဘောထားမှတ်ချက်များ သို့မဟုတ် အမူအကျင့်များ၊ (င) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးမှု၊ ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်၏ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့် အသုံးပြုမှုမှ ထွက်ပေါ်လာသော မည်သည့်သဘာဝမျိုးမဆို၊ (စ) ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများမှ သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ အနှောင့်အယှက်တစ်စုံတစ်ရာ သို့မဟုတ် ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ (ဆ) မည်သည့်အမှားအယွင်းများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ထရိုဂျန်မြင်းများ၊ သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုမှ ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် သို့မဟုတ် ပေးပို့နိုင်သော ကဲ့သို့သော၊ (ဇ) မည်သည့်အကြောင်းအရာတွင်မဆို အမှားအယွင်းများ သို့မဟုတ် လွဲချော်မှုများ၊ နှင့်/သို့မဟုတ် (ငါ) အာမခံ၊ မူပိုင်ခွင့်၊ စာချုပ်၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု (ပေါ့ဆမှု အပါအဝင်) သို့မဟုတ် အခြားသော ဥပဒေရေးရာ သီအိုရီ တစ်ခုခုအပေါ် အခြေခံသည်ဖြစ်စေ SORRENTO Properties နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အခြားကိစ္စရပ်တစ်ခုခု။ မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို SORRENTO များသည် သင့်အား $100 ထက်ပို၍ တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ အထက်ဖော်ပြပါ အတိုင်းအတာအထိ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ချန်လှပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ခြင်းအား ခွင့်မပြုဘဲ၊ ဤတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားကို ခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းအတာအထိ ကန့်သတ်ထားရမည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ပျက်စီးမှုများ၏ ကန့်သတ်ချက်များသည် SORRENTO နှင့် သင်အကြား ညှိနှိုင်းမှု၏ အခြေခံဒြပ်စင်များဖြစ်ကြောင်း သင် အသိအမှတ်ပြုပြီး သဘောတူပါသည်။
သက်တမ်း။ အသုံးပြုမှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် ၎င်းတို့ကိုလက်ခံသည့်နေ့မှစတင်သည် (အထက်ပါအတိုအစတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း) ဤကဏ္ဍနှင့်အညီ Sorrento Properties ကိုအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း အပြည့်အဝအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။
Sorrento မှ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရပ်စဲခြင်း။ Sorrento သည် မည်သည့်အသုံးပြုသူ၏ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုမဆို Sorrento Properties သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအား အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ အချိန်မရွေး၊ အကြောင်းမရှိဘဲ သို့မဟုတ် ရပ်တန့်ရန် လက်ဝယ်ရှိပါသည်။ သင်၏ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ရပ်စဲခံရနိုင်သည့် အကြောင်းအရင်းများတွင် ပါဝင်သော်လည်း (က) ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် သင် သို့မဟုတ် သင့်အဖွဲ့အစည်းသည် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အချိန်မီပေးချေရန် ပျက်ကွက်ပါက၊ (ခ) သဘောတူညီချက်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချိုးဖောက်ပါက၊ သို့မဟုတ် (ဂ) Sorrento သည် ဥပဒေအရ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါက (ဥပမာ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ပံ့ပိုးမှုမှာ၊ သို့မဟုတ် ဥပဒေမဲ့ဖြစ်သွားသည်)။ အကြောင်းကြောင့်ရပ်စဲခြင်းအားလုံးကို Sorrento ၏တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး Sorrento Properties သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများသို့ သင်၏ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ရပ်စဲခြင်းအတွက် Sorrento သည် သင့် သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုအတွက် တာဝန်မကင်းကြောင်း သင်သဘောတူပါသည်။
သင့်အနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရပ်စဲခြင်း။ Sorrento မှ ပံ့ပိုးပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ရပ်ဆိုင်းလိုပါက၊ Sorrento အား အချိန်မရွေး အသိပေးခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သင့်သတိပေးချက်ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Sorrento ၏လိပ်စာသို့ စာဖြင့်ပေးပို့ရပါမည်။
ရပ်စဲခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ရပ်စဲခြင်းသည် Sorrento Properties သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို အနာဂတ်အသုံးပြုမှုကို တားမြစ်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ရပ်စဲလိုက်သောအခါ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ထိုအပိုင်းကို အသုံးပြုပိုင်ခွင့်သည် ချက်ချင်းပင် အလိုအလျောက် ရပ်စဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Sorrento သည် ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်စဲခြင်းအတွက် သင့်အတွက် မည်သည့်တာဝန်ယူမှုမျှ ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့၏ သဘောသဘာဝအရ ရှင်သန်သင့်သည့် အသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အားလုံးသည် အကန့်အသတ်မရှိ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ အာမခံရှင်းလင်းချက်များနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ ကန့်သတ်ချက်များ အပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရပ်စဲထားရမည်ဖြစ်သည်။
Sorrento Properties ကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံများမှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး သင့်နိုင်ငံတွင် မရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အကြောင်းအရာများကို ရည်ညွှန်းချက်များ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ဤကိုးကားချက်များသည် Sorrento ကြေငြာရန် ရည်ရွယ်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ထိုကဲ့သို့သော သင့်နိုင်ငံရှိ ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာ။ Sorrento Properties ကို United States of America ရှိ ၎င်း၏စက်ရုံများမှ Sorrento မှ ထိန်းချုပ်ပြီး ကမ်းလှမ်းထားပါသည်။ Sorrento Properties သည် သင့်လျော်သည် သို့မဟုတ် အခြားနေရာများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ရနိုင်သည်ဟု Sorrento က ကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိပါ။ ထို့အပြင်၊ ဝန်ဆောင်မှု၏ အချို့သောအပိုင်းများကို အခြားဘာသာစကားသို့ ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်သော်လည်း Sorrento သည် ထိုဘာသာပြန်များ၏ အကြောင်းအရာ၊ တိကျမှု၊ သို့မဟုတ် ပြီးပြည့်စုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်စားပြုမှုများ သို့မဟုတ် အာမခံချက်မရှိပေ။ အခြားနိုင်ငံမှ Sorrento Properties ကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုသူများ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏ဆန္ဒအလျောက်ပြုလုပ်ကြပြီး ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေး။ သင်နှင့် Sorrento အကြား ဆက်သွယ်မှုများသည် Sorrento Properties သို့ သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် Sorrento အီးမေးလ်များ ပေးပို့ခြင်းဖြစ်စေ သို့မဟုတ် Sorrento Properties တွင် သတိပေးချက်များ ပို့စ်တင်ခြင်းဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့် သင်နှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်စေ အီလက်ထရွန်နစ်နည်းလမ်းများဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ စာချုပ်ဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်၊ သင်သည် (က) အီလက်ထရွန်နစ်ပုံစံဖြင့် Sorrento ထံမှ ဆက်သွယ်မှုများကို လက်ခံရယူရန် သဘောတူညီသည်။ နှင့် (ခ) စည်းကမ်းချက်များ၊ သဘောတူညီချက်များ၊ အကြောင်းကြားချက်များ၊ ထုတ်ဖော်မှုများနှင့် Sorrento သည် သင့်အား အီလက်ထရွန်နစ်ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသည့် အခြားသော ဆက်သွယ်မှုများအားလုံးကို စာဖြင့်ရေးသားရမည်ဆိုပါက ကျေနပ်စေမည့် မည်သည့်ဥပဒေကြောင်းအရ ဖြည့်ဆည်းပေးကြောင်း သဘောတူပါသည်။
တာဝန်။ အသုံးပြုမှုစည်းမျဥ်းများ နှင့် ဤနေရာရှိ သင့်အခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်များ သည် Sorrento ၏ ကြိုတင်ရေးသားထားသော သဘောတူညီချက်မပါဘဲ သင့်ထံ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း၊ စာချုပ်ခွဲခြင်း၊ လွှဲအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုရဘဲ၊ အထက်ဖော်ပြပါကို ချိုးဖောက်သည့် တာဝန်၊ စာချုပ်ခွဲ၊ လွှဲအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်းတို့သည် ပျက်ပြယ်သွားပါမည်။ ပျက်ပြယ်သည်။
အင်အားကြီး Majeure ။ Sorrento သည် ၎င်း၏ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပ အကြောင်းရင်းများကြောင့် လုပ်ဆောင်ရန် နှောင့်နှေးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက်၊ ဘုရားသခင်၏ လုပ်ရပ်များ၊ စစ်ပွဲ၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ အဓိကရုဏ်းများ၊ ပိတ်ဆို့မှုများ၊ အရပ်ဘက် သို့မဟုတ် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ၏ လုပ်ရပ်များ၊ မီး၊ ရေလွှမ်းမိုးမှုများ၊ မတော်တဆမှုများ၊ သပိတ်မှောက်ခြင်း သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အဆောက်အအုံများ၊ လောင်စာဆီ၊ စွမ်းအင်၊ အလုပ်သမား သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများ ပြတ်တောက်မှု။
မေးခွန်းများ၊ တိုင်ကြားချက်များ၊ သင့်တွင် Sorrento Properties နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မေးခွန်းများ၊ တိုင်ကြားမှုများ သို့မဟုတ် တောင်းဆိုမှုများရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ legal@sorrentotherapeutics.com. မင်းရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ငါတို့ အစွမ်းကုန်လုပ်မယ်။ သင်၏စိုးရိမ်မှုများကို ပြည့်စုံစွာဖြေရှင်းပြီးပြီဟု သင်ခံစားရပါက၊ နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးရန် သင့်အား ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
ကန့်သတ်ကာလ။ သဘောတူညီချက်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် သို့မဟုတ် ပတ်သက်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အကြောင်းရင်းတစ်ခုခုကို SORRENTO နှင့် SORRENTO မှ သဘောတူညီပြီး ဆောင်ရွက်မှု၏ အကြောင်းရင်းတစ်ခုပြီးနောက် (1) နှစ်အတွင်း စတင်ရမည်ဟု သဘောတူပါသည်။ မဟုတ်ပါက၊ ထိုသို့သော လုပ်ဆောင်ချက်ကို အမြဲတမ်း တားမြစ်ထားသည်။
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်နေရာ။ ဤအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများကို ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၏ ဥပဒေများနှင့်အညီ အုပ်ချုပ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပါမည်။ အငြင်းပွားမှုများအတွက် နေရာသည် San Diego, California ဖြစ်သည်။ ဤနေရာ၌ ပါတီများသည် ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် သယ်ဆောင်လာခဲ့သည့် မည်သည့်လုပ်ရပ်အတွက်မဆို အောက်ပါအကာအကွယ်များကို စွန့်လွှတ်ရန်သဘောတူသည်- ဖိုရမ်အဆင်ပြေမှုမရှိခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်မလုံလောက်ခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုမလုံလောက်ခြင်း။
ဘာသာစကားရွေးချယ်မှု။ အသုံးပြုမှု စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် ဆက်စပ်စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို အခြားဘာသာစကားတစ်ခုဖြင့် ပံ့ပိုးထားသော်လည်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးဆွဲထားသော ပါတီများ၏ ဆန္ဒဖြစ်သည်။
အသိပေးစာ။ Sorrento သည် သင့်အား အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုပေးရန် လိုအပ်သည့်အခါ၊ သင်၏ လက်ရှိအီးမေးလ်လိပ်စာကို Sorrento ပေးအပ်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ Sorrento ထံ သင်ပေးအပ်ခဲ့သော နောက်ဆုံးအီးမေးလ်လိပ်စာသည် မှန်ကန်မှုမရှိပါက သို့မဟုတ် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆို သင့်ထံ လိုအပ်သောသတိပေးချက်များ ပေးပို့နိုင်ခြင်း မရှိခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုမှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများမှ ခွင့်ပြုထားသော အကြောင်းကြားစာများပါရှိသော Sorrento ၏ပေးပို့ခြင်း မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ထိရောက်သောသတိပေးချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါလိပ်စာတွင် Sorrento အား သင်သတိပေးနိုင်ပါသည်။ Sorrento Therapeutics, Inc., Attn- ဥပဒေရေးရာ၊ 4955 ဒါရိုက်တာများနေရာ၊ San Diego, CA 92121။ ထိုသို့သောသတိပေးချက်ကို Sorrento မှ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြု ညအိပ်ပို့ဆောင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ပထမတန်းစာပို့ခ ကြိုတင်ငွေပေးစာဖြင့် အထက်ဖော်ပြပါလိပ်စာတွင် ပေးပို့သောစာဖြင့် Sorrento မှ လက်ခံရရှိသည့်အခါ မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။
စွန့်လွှတ်။ တစ်ကြိမ်တွင် အသုံးပြုမှုစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းများပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် စွန့်လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့်အချိန်တွင်မဆို အဆိုပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကို စွန့်လွှတ်ခြင်းဟု မှတ်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
ပြင်းထန်မှု။ အသုံးပြုမှုစည်းမျဥ်းများ၏ မည်သည့်အပိုင်းကိုမဆို အကျုံးမဝင်သော သို့မဟုတ် ကျင့်သုံးခြင်းမပြုပါက၊ ထိုအပိုင်းကို အတတ်နိုင်ဆုံးနီးပါး ထင်ဟပ်စေရန်၊ ပါတီများ၏ မူလရည်ရွယ်ချက်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ထင်ဟပ်စေကာ ကျန်အပိုင်းများကို အပြည့်အဝ သက်ရောက်မှုရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်ရေး။ US ဥပဒေ၊ Sorrento Properties ကို သင်ရရှိထားသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေများနှင့် အခြားသော တည်ဆဲဥပဒေများမှ လွဲ၍ သင်သည် Sorrento Properties ကို အသုံးပြုခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်း မပြုရပါ။ အထူးသဖြင့်၊ သို့သော် အကန့်အသတ်မရှိ၊ Sorrento Properties သည် တင်ပို့ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်းမပြုရ (က) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ပိတ်ဆို့ခံထားရသော မည်သည့်နိုင်ငံများတွင်မဆို သို့မဟုတ် (ခ) အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ အထူးသတ်မှတ်ထားသောနိုင်ငံသားများစာရင်း သို့မဟုတ် အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးဌာန၏ ငြင်းဆိုထားသည့် မည်သူမဆိုထံ၊ လူစာရင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းစာရင်း။ Sorrento Properties ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် (y) US အစိုးရ၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ခံနေရသော နိုင်ငံတစ်ခုတွင် တည်ရှိနေခြင်းမဟုတ်ကြောင်း သို့မဟုတ် "အကြမ်းဖက်သမားများကို ပံ့ပိုးပေးသည့်" နိုင်ငံအဖြစ် US အစိုးရမှ သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရသော (y) နှင့် (z) သင့်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး အာမခံပါသည်။ တားမြစ်ထားသော သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ထားသော ပါတီများ၏ မည်သည့်အမေရိကန်အစိုးရ၏စာရင်းတွင်မျှ မဖော်ပြထားပါ။ Sorrento မှ ပံ့ပိုးပေးသော ထုတ်ကုန်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် နည်းပညာများသည် United States ၏ ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီဖြစ်ကြောင်း သင်အသိအမှတ်ပြုပြီး သဘောတူပါသည်။ သင်သည် ဤဥပဒေများနှင့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်သည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသို့ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ၊ တင်ပို့ခြင်း၊ ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် နည်းပညာများကို တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုရပါ။
စားသုံးသူတိုင်ကြားချက်များ။ California Civil Code §1789.3 အရ၊ 1625 N. Market Blvd.၊ Ste N-112၊ Sacramento တွင် စာဖြင့်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားစားသုံးသူရေးရာဌာန၏ စားသုံးသူရေးရာဌာနခွဲ၏ တိုင်ကြားစာအကူအညီယူနစ်ထံ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။ , CA 95834-1924 သို့ တယ်လီဖုန်းဖြင့် မှာယူနိုင်ပါသည်။ (800) 952-5210.
တစျခုလုံးကိုသဘောတူညီချက်။ အသုံးပြုမှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် ဤအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပါတီများ၏နောက်ဆုံး၊ ပြီးပြည့်စုံသော၊ သီးသန့်သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပါတီများကြားတွင် ကြိုတင်ဆွေးနွေးမှုများအားလုံးကို အစားထိုးကာ ပေါင်းစပ်ထားသည်။